Raja Festival Odisha miaraka amin'ny Sandpebblestours - Call + 91-993-702-7574
Hanomana ny dianao ho any Odisha? Avy eo, tonga soa eto amin'ny Fihaonan'i Raja Festival Odisha, fotoana mety tsara hahitana ny fanjakana amin'ny tena loko.
"Raja" - Izany dia mitovy amin'ny feo; Aza manelingelina ny sainao betsaka !!! Ny fety dia manolotra fifandanjana malefaka amin'ny dihy, fihirana, karazan-tsakafo, ary fomban-drazana, ka miteraka zava-mahaliana. Azo antoka fa fanandramana mandritra ny fialantsasatra ho amin'ny ambaratonga hafa.
Ny fihinanana ny mofomamy, Sand Pebbles Tour N Travels dia manolotra fanafody mampientanentana mba hanampiana izany entana izany ao amin'ny fetin'ny "Raja". Ary, inona no mety ho fomba tsara kokoa noho ny mandeha any amin'ny faritra samihafa amin'ny fanjakana mba hiaina ny fankalazana amin'ny havan-tianao, sa tsy izany?
Mba hitazonana ny fankalazana ara-panahy, amin'ity indray mitoraka ity Sand Pebbles Tour N Travels manolotra 20% fihenam-bidy amin'ny famandrihana, ho an'ny fahafinaretana mivezivezy sy ny dia lavitra miaraka amin'ny fiaramanidina maoderina mitovitovy amin'ny 60. Na mila milina fiarandalamby Sedan, SUV, na fiaramanidina avo lenta ianao, dia azonao antoka fa hitady ny dia ny safidinao amin'ny alalan'ny tsindry fotsiny.
Birao ny saran-dalana mankany Odisha Sand Pebbles Tours ary alao ny haren'ny fahatsiarovan-tena izay hodiavinao mandritra ny androm-piainana. Antsoy: + 91-993.702.7574.